ShweMinThar: ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် ယဉ်ကျေးကြပြီလော
လူသားတို့၏ ဘ၀တစ်သက်တာ ကံကြမ္မာကို သူတို့၏ မွေးရာပါဗီဇနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့က များစွာသြဇာသက်ရောက်လျက် ရှိပေသည်။ ဗီဇဟုဆိုရာတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရှေးအခါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇဟူသည် မွေးရာပါ ဖြစ်သောကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ဟု ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသည်။
မျက်မှောက်ခေတ်တွင်မူ သိပ္ပံပညာထွန်းကားလာသည့်အလျောက် မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် လူသားတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ ရလာပြီဖြစ်သည်။ ယင်းကိုပင် သိပ္ပံပညာ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်လည်း ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား နေကြသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသွေးအသားနှင့် စပ်ဆိုင်သောမျိုးရိုးဗီဇကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်းသည် လူသားထုအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ရပ် အထိ အကျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်သည်ကားမှန်ပေသည်။ သို့သော် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မပြုနိုင် သေးသရွေ့ လူသားတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းသည် ကျောက်ခေတ်ကထက် တစ်ဆင့်မြင့်မားတိုးတက် လာပြီဟု မဆိုနိုင်သေး ချေ။
ယဉ်ကျေးမှုဟုဆိုရာတွင် ဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှု (Tangible Culture) နှင့် ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု (Intangible Culture) ဟူ၍ရှိပေသည်။ ဒြပ်ရှိ ယဉ်ကျေးမှုဆိုသည်မှာ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ဖော်ပြနိုင်သော၊ သိသာမြင်လွယ်သော ပြယုဂ်သင်္ကေတများပင် ဖြစ်သည်။ ပမာဆိုရသော် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ပိရမစ်ကြီးများ၊ မဟာတံတိုင်းကြီးများ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးများ၊ နန်းတော်ကြီးများ၊ပိသုကာလက်ရာများနှင့် အနု သုခုမပစ္စည်းများပင် ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ရှေးဟောင်းလက်ရာ အမွေအနှစ် မရှိစေကာမူ မျက်မှောက်ခေတ်၌ ဓနဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွင် ရှေ့တန်းရောက်လာကြသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးမျှော်စင်ကြီးများ၊ အဆန်းကြယ်ဆုံး အဆောက်အဦများအစရှိသည့် ထင်သာမြင်သာသော သင်္ကေတများကို သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် တည်ဆောက်ကာ မိမိတို့၏ ဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်းအား မြှင့်တင်ပြနေကြသည်။
လူသားတို့သည် အဆိုပါဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှုလက်ရာ အစုစုတို့ကို ရည်ညွှန်းလျက် မိမိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မာန်မာနတက်နေကြသည်။ ယင်းဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှု လက်ရာများကိုပြကာ မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်ထွန်းကားသောလူ့အဖွဲ့အစည်း အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့လူမျိုးသည် ယဉ်ကျေးသောလူမျိုး အဖြစ်လည်းကောင်း ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားခဲ့၊၀င့်ကြွားဆဲ၊ ၀င့်ကြွားရန်အားထုတ်နေကြမြဲဖြစ်သည်။
မိမိတို့ကဲ့သို့ ဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှုမပြနိုင်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုမူ မိမိတို့လောက်မယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဟု အထင် အမြင်သေးတတ်ကြသည်။ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများသည် မိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှုပြယုဂ်ဟုပင် ထင်မြင်နေကြသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် အဆိုပါဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှုများအား ပိုင်ဆိုင်ရုံဖြင့် မိမိတို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ယဉ်ကျေးလှပြီဟု ကောက်ချက်ဆွဲ၍ မရနိုင် ချေ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုယဉ်ကျေးသည် မယဉ်ကျေးသည်ဆိုခြင်းကို အဓိကအားဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော ‘စံမှတ်ကျောက်’ မှာ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုသာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း နေထိုင်ကြကုန်သော လူသားထုအတွင်း စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည့် ယုံကြည်မှု၊ တန်ဖိုးထားတတ်မှု၊ သဘောထားခံယူချက်၊ ဘ၀အမြင်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတို့ ပင်ဖြစ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှုမည်မျှပင်ပိုင်ဆိုင်ပါစေ တောတွင်းနေလူသားစား လူရိုင်းတို့နှင့်ခြားနားသာလွန် မြင့်မား သော ယုံကြည်မှု၊ တန်ဖိုးထားတတ်မှု၊ သဘောထားခံယူချက်၊ ဘ၀အမြင်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတို့သာမရှိပါက ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်းဝင် တို့အား လူယဉ်ကျေးများဟု မသတ်မှတ်နိုင်ပေ။ အဆိုပါ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအား အဓိကပြဌာန်းပေးနေသည်မှာ တိုးတက်ထွန်းကားလှ ပါသည်ဆိုသော သိပ္ပံပညာဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေး၍ မရနိုင်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇသာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။
လူသားတိုင်း လူသားတိုင်းတွင် ပင်ကိုယ်မူလအားဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇ သုံးမျိုးသုံးစားရှိပေသည်။ ယင်းတို့မှာ (၁) သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇ၊ (၂) လူသားဗီဇ နှင့် (၃) ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇတို့ပင်ဖြစ်သည်။ လူသားတိုင်းသည် ယင်းတို့၏အလိုဆန္ဒပြည့်ဝစေရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှား နေချိန်တွင် ယင်းဗီဇသုံးမျိုးထဲမှ တစ်မျိုးမျိုး၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ခံယူနေကြရသည်။
လူသားတို့၏ မနေကံမြောက် ကြံစည်တွေးခေါ်မှုများသည် မြင့်မြတ်မှန်ကန်သော ဘာသာတရားတစ်ခု၏ ဆုံးမသွန်သင်ညွှန်ပြမှုကို မခံယူ ရသည့်အခါမျိုးတွင် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇက လူသားတို့အား လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်ထားတတ်စမြဲဖြစ်သည်။ မိမိတို့ကိုယ်ကို ‘လူ’ ဟူ၍အသိ အမှတ်မပြုမိမီကာလမှအစပြု၍ မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခု လက်ဆင့်ကမ်း အမွေဆက်ခံရရှိခဲ့သော သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇအချို့မှာ ယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်လှပါသည်ဆိုသော မျက်မှောက်ခေတ်တိုင်အောင် လူသားတို့ထံ၌ ကျန်ရှိနေပေသေးသည်။
လူသားတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသည်ကား မှန်ပါသည်။ သို့သော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ကား အောက်တန်းကျ သေးသိမ်လှသည့် တွေးခေါ်မြော်မြင်မှု၊ ဓလေ့စရိုက်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတို့မှာ ကျောက်ခေတ်လူသားတို့နှင့် မခြား တည်ရှိနေဆဲသာဖြစ်သည်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့သောအခြေအနေမျိုးတွင်မူ လူသားတို့၏ အောက်တန်းကျ၍ ရိုင်းစိုင်းယုတ်ညံ့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇစိတ်များမှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှု မရှိတတ်ချေ။ သို့သော် ယင်းအခြေအနေမှသည် တစ်စုံတစ်ရာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် လူသားတို့ရင်ဝယ် တိမ်မြှုပ် ဖုံးကွယ်နေသည့် လောဘ၊ဒေါသ၊ မာန်မာနတရားတို့ သည် မီးတောင်ပေါက်ကွဲသကဲ့သို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်စွာ ထွက်ပေါ်လာတတ်စမြဲ ဖြစ်သည်။
ယင်းသည် လူသားတို့၏စိတ်ဘ၀င်တွင် နက်ရှိုင်းစွာခိုအောင်းလျက်ရှိသော အာသာဆန္ဒနှင့် အလိုရမ္မက်တို့၏ အကျိုးဆက်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ မည်မျှစိတ်သဘောထားကောင်းလှပါသည်ဆိုသောသူပင် မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာပါမူ သတိလက်လွတ်တွေးခေါ်၊ ပြောဆို၊ ပြုမူလာတတ်ကြသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် လူသားတစ်ဦး၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေသည် တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်နှင့် ဘာမျှထူးခြားမှု မရှိတော့ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုလေ့ရှိသော ‘ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်း’ ဟူသည့် ဆိုရိုးစကားက လူသားတို့ထံတွင် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇ ရှိနေသေးကြောင်း ဖော်ကျူးလျက်ရှိပေသည်။
လူသားတို့တွင် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇငုပ်လျှိုး တည်ရှိစေကာမူ လူသားနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့အကြားတွင် အဓိကအကျဆုံး ကွဲပြားခြားနားသည့် စရိုက်လက္ခဏာတစ်ရပ်တော့ရှိပါသည်။ လူသားက မိမိတို့ဘ၀၏ ဖြစ်တည်မှုနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖြစ်ပျက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် တုန့်ပြန်မှုပြုတတ်ပြီး တိရစ္ဆာန်တို့ကမူ ခံစားမှု သက်သက် ဖြင့်သာ တုံ့ပြန်တတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားတို့တွင် သားရဲတိရစ္ဆာန်တို့ထက် နှိုင်းမရအောင် သာလွန်ဖွံ့ဖြိုးသော အသိဉာဏ်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ‘အ၀ိဇ္ဇာ’ တည်းဟူသော အမြင်လွဲမှားမှုက အသိဉာဏ်၏စွမ်းရည်ကို အပြည့်အ၀အသုံးမချနိုင်အောင် နှောင့်ယှက် ဟန့်တားထားတတ်ပေသည်။ ဘာသာတရားအသီးသီးသည် လူသားတို့၏အမြင်လွဲမှားမှုအားဖယ်ရှားပစ်ရန် မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အမြစ်တွယ်တည်ရှိခဲ့သော သားရဲတိရစ္ဆာန် ဗီဇအား သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်နှင့် အကြင်နာတရားပြည့်ဝသော အရည်အသွေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
လူသားတစ်ဦးသည် ကြင်နာသနားတတ်ခြင်း၊ သူတစ်ပါး၏အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတတ်ခြင်းနှင့် အခြားသူတို့ကြုံတွေ့နေရ သော ဒုက္ခဆင်းရဲအခက်အခဲတို့မှ လွတ်မြောက်စေရန် ကူညီဖြေရှင်းပေးတတ်ခြင်းတည်းဟူသော အရည်အသွေးများနှင့် ပြည့်စုံနေပြီဆို လျှင် ယင်းလူသား၏စိတ်ဘ၀င်ဝယ် လူသားဗီဇထွန်းကားနေပြီဖြစ်ကြောင်း အကဲခတ်သိရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ လူသားဗီဇထွန်းကားနေ ခြင်းသည် လူသားတစ်ဦးအဖို့ ပုံမှန်အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ကိုယ်ကို ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မြှင့်တင်လိုသူတို့မှာကား အဆိုပါ လူသားဗီဇမှတစ်ဆင့်တက်၍ ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇထွန်းကားလာရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးကြရပေလိမ့်မည်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော စိတ်ထားဖြင့် နေထိုင်ကာ မေတ္တာပွားများခြင်း၊ ကရုဏာထားခြင်း၊ သူတစ်ပါး ကြီးပွားချမ်းသာမှုကို ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ သတ္တ၀ါအားလုံးအပေါ် ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားဘဲ တစ်ပြေးညီစာနာထောက်ထားခြင်းတည်းဟူသော ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံလာအောင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်း အားဖြင့် မိမိတို့၏စိတ်ဘ၀င်ဝယ် ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇထွန်းကားလာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ပါသည်။
ယင်းသို့ စင်ကြယ်မြင့်မြတ်သော ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇနှင့် ပြည့်စုံရန်မှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုပြုရမည်သာဖြစ်သည်။ သဘာဝလွန် တန်ခိုးရှင်ဆိုသူများထံ ခယ၀ပ်တွား ပူဇော်သမှုပြုခြင်းမျှဖြင့်ကား လူသားတစ်ဦး၏စိတ်ဘ၀င်ဝယ် ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇ ထွန်းကားလာလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ မိမိ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် အားထုတ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖန်ဆင်းရှင်၊ တန်ခိုးရှင်၊ နတ်ဒေ၀တာ တစ်စုံတစ်ရာ၏ကောင်းချီးပေးမှုကို တောင်းခံနေစရာမလိုပေ။ တောင်းခံနေ၍လည်း မရနိုင်ချေ။ မိမိစိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင် ပြုပြင်ရာတွင် မြင့်မြတ်လှပါသည်ဆိုသော မြစ်ရေအတွင်း ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အား သက်ဆင်းဆေးကြောခြင်း အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၍ လည်းကောင်း မရနိုင်သလိုသက်ရှိတို့၏ အသွေးအသားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ကာ ဆေးကြောခြင်းဖြင့်လည်း မရနိုင်ပေ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလျက် ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ရမည့်ကိစ္စသာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။
မိမိတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူသည် ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့ခြင်း၊ လူသားချင်း မနာလို ၀န်တိုမုန်းတီးခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကဲ့သို့သော အပျက်သဘောဆောင်သည့် စရိုက်လက္ခဏာဆိုးများအား ပယ်သတ်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ လူသားချင်း ယိုင်းပင်းကူညီချစ်ခင်မှု၊မေတ္တာကရုဏာထားမှုကဲ့သို့သော အပြုသဘောဆောင်သည့် စရိုက်လက္ခဏာကောင်းများ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးကြရပေမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သာ မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ မွန်မြတ်သန့်စင်သော ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇနှင့် ပြည့်စုံသူများဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပေသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် မိမိစိတ်ကို မွန်မြတ်သန့်စင်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းသည် ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေးလူသားတိုင်းဆောင်ရွက် သင့်သော အမွန်မြတ်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားဗီဇကို အသုံးပြုလျက် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားပစ်ကြရမည်။ ထို့နောက် မှန်ကန်မြင့်မြတ်ပြီး လောက၏သစ္စာတရားကို ညွှန်ပြနိုင်သော ဘာသာတရားတစ်ခု၏ အဆုံးအမအား ခံယူလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့စိတ်ဘ၀င်ဝယ် လူသားဗီဇထက် တစ်ဆင့်မြင့်မားသော ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇထွန်းကား လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လူသားတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇကို သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇမှသည် လူသားဗီဇဆီသို့လည်းကောင်း၊ လူသားဗီဇမှ ဗြဟ္မစိုရ် ဗီဇဆီသို့လည်းကောင်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော ဘာသာတရားတို့ထဲမှ တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး နေထိုင်ကြမည်ဆိုပါမူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇထက် တပ်ဆင့်သာလွန်မြင့်မြတ်သော ‘အရိယာဗီဇ’ ဟူသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇတစ်ရပ်ကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
အရိယာဗီဇ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘ၀၏သစ္စာတရားကို မိမိဘာသာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ပြုခြင်းအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပိုင်းခြား သိမြင်နားလည်လာကာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ချမ်းသာနေသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုသော် သစ္စာဉာဏ်ကို မျက်မှောက်ပြုရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သစ္စာဉာဏ်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက် မိမိတို့ကိုယ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုကြရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ရ မည့်ကိစ္စမှာ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓသြ၀ါဒ အဆုံးအမများကပေးလိုသော ဆိုလိုရင်းအနှစ်သာရကို သိရှိနားလည်ဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးလှပေသည်။ ထိုသို့နားလည် သဘောပေါက်ရန်မှာ ဗုဒ္ဓ၏လမ်းညွှန်အဆုံးအမသြ၀ါဒ အစစ်အမှန်ကို သိရှိဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မျက်မှောက် ခေတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် မည်သို့ခံယူကျင့်သုံးသွားရမည်ဆိုသော အချက်များကိုလည်း သိရှိထားသင့်ပေသည်။
လူသားတစ်ဦးအဖို့ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ လမ်းစဉ်တို့အား နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် သူ၏နှလုံးအိမ်ဝယ် ပရိယတ္တိသာသနာ တည် ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိရှိထားသည့်အလျောက် ဗုဒ္ဓညွန်ပြသောလမ်းစဉ်အတိုင်း ဘ၀တစ်သက်တာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးသွားမည်ဆိုပါက ထိုသူ၌ပဋိပတ္တိသာသနာ တည်ပေတော့သည်။
ဤသို့ လိုက်နာကျင့်သုံးသွားခြင်းဖြင့် မိမိတို့စိတ်ဘ၀င်ဝယ် အရိယာဗီဇထွန်းကားလာကာ လောက၏သစ္စာတရားကို အရှိအတိုင်းသိမြင် ပြီဆိုပါမူ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တွင် ပဋိဝေဓသာသနာ တည်ရှိသွားပြီ ဖြစ်တော့သည်။
လူသားတို့သည် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာအခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေချိန်တွင် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇ၊ လူသားဗီဇနှင့် ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇတည်းဟူသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇ သုံးခုအနက်မှ တစ်ခုခု၏လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေကြရစမြဲဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကောင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် လူသားဗီဇ သို့တည်းမဟုတ် ဗြဟ္မစိုရ်ဗီဇက ပေါ်လွင်ထင်ရှားကာ ယဉ်ကျေးသယောင် အသွင်ဆောင်နေတတ်ကြသည်။ သို့သော် မိမိတို့ ‘အတ္တ’ ကိုထိပါးလာသည့်အခါ အသိတရားလွတ်သွားသည့် အခါမျိုးတွင်ကား လူ့ဘောင်သမိုင်းမတိုင်မီကာလမှအစပြု၍ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ခိုတွယ်ဆက်ခံလာခဲ့ရသော သားရဲတိရစ္ဆာန်ဗီဇက ဘွားဘွားကြီး ပေါ်ထွက်လာတတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူသားတို့သည် မိမိတို့၏ဗီဇစိတ်ကို အရိယာဗီဇဆီသို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မပြုနိုင်သေးသရွေ့ ဗီဇစိတ်သုံးမျိုး၏ လွှမ်းမိုးမှုကို အလှည့်ကျခံစားနေရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဗီဇစိတ်သုံးမျိုး အလှည့်ကျပြောင်းလဲ လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံယူနေရသမျှကာလပတ်လုံး လူသားတို့၏ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုသည်လည်း ကျောက်ခေတ်ကာလကထက် ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မည် မဟုတ်ပါချေ။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် မိမိတို့၏ဗီဇစိတ်အား အရိယာဗီဇဆီသို့ရောက်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မှသာ အမှန်တကယ်ယဉ်ကျေး သော လူ့ဘောင်လောကကြီးအဖြစ် မြှင့်တင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့မြှင့်တင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လူသားတစ်ဦးချင်းအနေနှင့် ဗုဒ္ဓညွှန်ပြခဲ့ သောလမ်းစဉ်ကို သိရှိနားလည်အောင် အားထုတ်ခြင်းဟူသော ပရိယတ္တိသာသနာ၊ မိမိနားလည်သည့်လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံး ခြင်းဟူသော ပဋိပတ္တိသာသနာတို့နှင့် ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်ကြရပေလိမ့်မည်။ ယင်းသာသနာနှစ်ရပ်ပြည့်စုံလာသည်နှင့် လောက၏ သစ္စာတရားကို မချွင်းမချန်သိရှိနားလည်ကာ ဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းဟူသော ပဋိဝေဓသာသနာနှင့် ပြည့်စုံသွားပါလိမ့် မည်။ ထိုသို့ ပဋိဝေဓသာသနာနှင့် ပြည့်စုံသွားသူတို့အဖို့ ဘ၀တစ်လျှောက်တွင် မည်သို့သောလောကဓံ အခြေအနေမျိုးနှင့်မဆို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါစေ သူ၏နှလုံးအိမ်ဝယ် အရိယာဗီဇမှတစ်ပါး အခြားမည်သည့်ဗီဇစိတ်မှ ပေါ်ထွန်းမလာနိုင်တော့ချေ။ လူဟူ၍ သတ်သတ်မှတ်မှတ် မဖြစ်ထွန်းမီကာလမှအစပြု၍ လက်ဆင့်ကမ်း အမွေဆက်ခံခဲ့ရသောဗီဇစိတ်များကို အပြီးသတ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင် ခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြန်၍ မေးခွန်းထုတ်ကြည့်သင့်ပါသည်။ ရှေးကတည်ရှိခဲ့သည့် ပိရမစ်ကြီးများ၊ မဟာတံတိုင်းကြီးများ၊ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးများ၊မျှော်စင်ကြီးများအစရှိသည့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ပိသုကာလက်ရာများနှင့် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် တိုးတက်ထွန်းကားလာသည့် ကွန်ပျူတာကွန်ရက်စနစ်များကိုညွှန်ပြကာ လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မား နေပါပြီဟု ကြွေးကြော်နိုင်ပါပြီလော။ မကြာသေးမီကမှ တိုးတက်ထွန်းကားလာသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာ အတတ် ပညာသည် လူသားတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇကိုမူ ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပေ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားခဲ့သည့် ဓမ္မ လမ်းစဉ်နှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာ မိမိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းကို မြင့်မားလာအောင် ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပေတော့သည်။
Ref: 1. Buddhism by Chrismas Humphreys
2. Practical Buddhism by K.Sri Dhammananda